Wararka - ku saabsan laabbo laab, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad wax ogaato
ku saabsan ningbo laab, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad wax ogaato
Haye, marka hore gabi ahaanba waan fahmay waxaad ka welwelsan tahay iyo sababta, maxaa yeelay mar walba waxaad tahay macmiilka ugu dambeeya ee warqadda ka hor .Waxaa jira qodobo sida hoos ku qoran waxaan rabaa inaan kuu sharaxo sharraxaad cad, si kasta oo aad noola shaqayso ama maya .
1: ”NINGBO FOLD” guddiga foolmaroodiga C1S waa warqad taxane ah oo ka socota APP, ma aha kaliya warqad laga soo saaray magaalada ningbo, taasi micnaheedu waa warshad ma samayn karto isla warqaddan, marka laga reebo APP.Sidaa darteed haddii uu jiro qof kuu sheego inuu samayn karo isku mid, adiga sinaba, laga yaabee inay isku mid uun u egtahay, laakiin tayada ayaa gabi ahaanba ka duwan.
Waxaana si weyn loogu isticmaalaa samaynta sanduuqa daawada gudaha iyo dibaddaba, maxaa yeelay waxay leedahay astaamo badan oo hoose:
WhCaraar -sarre, midnimo fiican, sinnaan wanaagsan, dusha siman oo jilicsan, saamayn daabacaad oo aad u fiican;
ArBarcode waxaa lagu daabici karaa leysarka warqad gaar ah (oo lagu dabaqi karo koodhka kormeerka elektiroonigga ee daawooyinka);
StrengthAwood warqad sare, qallafsanaan aad u fiican, waxqabad sanduuq oo wanaagsan, oo ku habboon dhammaan noocyada baahiyaha dib-u-habaynta;
AckBack waxay noqon kartaa daabacaad laba-midab leh, kor u qaad sawirka baakadaha;
Back Dhinaca dambe wuxuu leeyahay shaqo bakteeriya oo gaar ah, iyada oo loo marayo ogaanshaha SGS, wuxuu si wax ku ool ah u hor istaagi karaa taranka Escherichia coli iyo Staphylococcus aureus;
2: APP, waa warshad aad u weyn oo soo saarta dhammaan noocyada waraaqaha, waxayna haysataa warqadda ugu tayada sareysa adduunka. Dhammaan warshadaha waraaqaha ah, waligood si toos ah ugama ganacsadaan macaamiisha kama dambaysta ah. waxay leeyihiin wakaalad badan oo adduunka oo dhan ah, dhammaan wakaaladahana waa inay ka iibsadaan tiro cayiman bil kasta si kasta oo ay suuqa ugu iibiyaan.
Annaguna waxaan ka mid nahay hay'adaha, farqiga ugu weyn ayaa ah inaan APP ganacsi la samayno gudaha iyo dibaddaba, dalabaadkayagu aad buu u weyn yahay sidaa darteed waxay na siiyaan qiimaha ugu fiican.
3: waxaan maanta helaa warka, qiimuhu wuu sii socon doonaa waqtiga dheer ee soo socda, wuxuu kor u kacay 100 usd halkii jimcihii la soo dhaafay (Maarso 10th, 2021). Markaa haddii aad runtii u baahan tahay, kaliya xaqiiji ASAP, waxay badbaadin doontaa lacag aad u badan.
Waxayna hoos u dhici kartaa mustaqbalka, haddii aad doorato inaad nala shaqeyso, ha ka welwelin, Haddii APP ay na siiso qiimo jaban maalin, annaguna waxaan ku siin doonnaa qiimo jaban. Kaliya waxaan kasbanaa waxa ay tahay inaan helno.
4: waxaan u malaynayaa in qaar ka mid ah wakaaladaha ku jira suuqaaga ay haystaan ​​xoogaa kayd ah, waxayna kugu iibin karaan qiimo aad u wanaagsan, laakiin ma ogtahay, haddii warqadda in ka badan 3 bilood tan iyo markii la soo saaray, tayada wax badan iska beddesho, sida midabka, qoyaanka oo sidaas maya .Sidaa darteed marna ma soo jeedinno in macaamiisheena ay ku kaydsadaan tiro aad u badan mar, iibsashada billaha ayaa ugu fiican.
5: Marna ha ku qaadin halis xagga tayada.
Waxa aan samayn karno ayaa ah inaan kuu oggolaanno inaad isticmaasho lacagta yar si aad u hesho warqadda tayada sare leh.
Lacagtaas oo kale waxaan u samaynaa sidii aan doonaynay.
Loogu talagalay ganacsigeena muddada-dheer
Waqtiga dhejinta: Mar-24-2021